Vaovao - Vaovao lehibe
Miaraka amin'ny fitomboan'ny isan'ny orinasam-barotra any ivelany tato ho ato dia niharan'ny tsy fahampiana matanjaka ny orinasanay tamin'ny tapany faharoa tamin'ny taona lasa. Ho setrin'ity toe-javatra ity dia nanisy fatana fandoroana hafahafa vaovao izahay tamin'ity taona ity.
Mifarana ny fanamboarana ny lafaoro vaovao. Ny lafaoro vaovao dia antenaina hapetraka amin'ny famokarana amin'ny 10 Jona amin'ity taona ity. Aorian'ilay lafaoro elektrika vaovao, antenaina hampiakatra 2000 taonina ny fahaiza-manao isan-taona.
Torohevitra:Ny lafaoro famelana elanelam-potoana dia karazana fitaovana famatsiana herinaratra izay mamadika ny faharetan'ny herinaratra 50 Hz AC ho fahita matetika (300 Hz ka hatramin'ny 1000 Hz). Izy io dia mamadika ny elanelam-potoana AC matetika ho lasa ankehitriny mivantana aorian'ny fanitsiana, ary avy eo manova ny ankehitriny mivantana ho lasa mpanelanelana amin'ny elanelam-potoana antonony azo ovaina mba hanomezana ny elanelam-potoana ifandimbiasana izay mifandimby mivezivezy amin'ny alàlan'ny coil capacitor sy induction, miteraka tsipika hery mahery vaika ao anaty ny coil fampidirana, Ary manapaka ny metaly vy ao anaty coil fampidirana, izay mamoaka onja eddy lehibe ao anaty akora vy.
Ny fahita matetika miasa ao amin'ny lafaoro fampidirana matetika (eto aorian'izay dia antsoina hoe lafaoro fanelanelanana antonony) dia eo anelanelan'ny 50 Hz sy 2000 Hz, izay be mpampiasa amin'ny fandoroana metaly tsy ferrous sy metaly ferrous. Raha ampitahaina amin'ny fitaovana fanariana hafa, ny lafaoro fampidirana hafanana antonony dia manana tombony amin'ny fahombiazan'ny hafanana avo lenta, fotoana fandehanan-javatra fohy, fatiantoka firafitry ny firafitry ny firaka, fitaovana malemy kokoa, tsy fandotoana ny tontolo iainana, ary fifehezana marina ny mari-pana sy ny fananganana vy metaly.
Ity karazana ony eddy ity dia misy ihany koa ny toetran'ny mpanelanelana matetika, izany hoe ny elektrôna maimaim-poana amin'ny fikorianan'ny metaly amin'ny vatana vy misy fanoherana hiteraka hafanana. Tetezana telo-dingana voafehy voafehy voafintina voafehy no ampiasaina hanovana ny fifandimbiasana ho lasa ankehitriny mivantana. Ohatra, ny varingarina metaly dia apetraka ao anaty coil fampidirana ary misy fatrany matetika mifandimby. Ny varingarina metaly dia tsy mifandray mivantana amin'ny coil fampidirana. Ny mari-pana amin'ny coil dia tena ambany dia ambany, fa ny velaran'ny varingarina dia main'ny mena na koa ny mitsonika, Ary ny hafainganan'ny mena sy ny mitsonika dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny matetika sy ny ankehitriny. Raha apetraka eo afovoan'ny coil ny varingarina, dia mitovy ny mari-pana manodidina ny varingarina, ary ny fanafanana sy ny fiempoana ny varingarina dia tsy mamokatra entona manimba sy fandotoana maivana.